Maamulka Barcelona Oo Go'aan Ka Gaadhay Gool Dhaliyaha Badalka Ugu Noqonaya Luis Suarez- Aubameyang Mise Rodrigo Moreno? - Gool24.Net
Maamulka kooxda Barcelona ayaa ugaadhsi ugu jira gool dhaliye tayo sare leh oo badal u noqon kara Luis Suarez oo inta xili ciyaareedkan ka hadhsan dhaawac ku seegaya kadib markii uu qaliin jilibka ah dhawaan maray.
Tababare Setien ayaa todobaadkii hore xaqiijiyay in ay kooxdiisa Barcelona suuqa ugu jirto gool dhaliye laakiin hadda waxaa la ogaaday xidiga ay maamulka Camp Nou isla qaateen in ay la soo saxiixdaan.
Markii hore waxaa la sheegay in Barcelona ay doonayso kabtanka kooxda Arsenal ee Aubameyang si uu badal ugu noqdo Luis Suarez balse hadda waxaa kala cadaatay in Barca ay wax walba u samayn doonto sidii ay ku heli lahayd Rodrigo Moreno.
Wargayska Sport ee magaalada Barcelona ka soo baxa ayaa shaaciyay in maamulka Camp Nou ay wax walba u samayn doonaan sidii ay kula soo saxiixan lahaayeen gool dhaliyaha kooxda Valencia ee Rodrigo Moreno.
Waxaan warkan lagu xaqiijiyay in hadda ay Barca meesha ka saartay suurtogalnimada Aubameyang oo markii hore lala xidhiidhinayay.
Warkan ayaa lagu cadeeyay in maamulada kooxaha Barcelona iyo Valencia ay wada xaajoodyo yeesheen maalmihii la soo dhaafay iyada oo uu dhex dhexaadinayay wakiilka Rodrigo Moreno ee Jorge Mendes.
Valencia ayaa diyaar u ah in ay Barcelona ka iibiso Rodrigo Moreno laakiin iyada oo wada xaajoodyada labada dhinac socdaan, waxay barri iskaga hor iman doonaan kulan adag oo la Liga ka tirsan markaas oo ay suurtogal tahay in ay maamulada labada kooxood wada hadalada sii xoojin karaan.
Barcelona ayaa barri booqan doonta kooxda ay Rodrigo Moreno ka doonayaan ee Valencia, waana fursad ay labada kooxood ku sii wada xaajoon karaan.
Qorshaha Barcelona waa in ay maalmaha soo socda amaah ku helaan Rodrigo Moreno isla markaana ay mushaarkiisa bixiyaan iyaga oo waliba Valencia lacag ku siin doona heshiiska amaahda ah waxaana heshiiskan lagu dari doonaa qodob Barca ay suuqa xagaaga xidigan si rasmi ah ugula wareegi karto.
Rodrigo Moreno ayaa kulanka habeen danbe ka hor iman doona Barcelona laakiin waxa uu doonayaa in uu ku soo biiro Camp Nou taas oo noqon karta kulankiisii ugu danbeeyay ee uu Barca ka hor imanayo.